Ukukhuseleka kwabasebenzi yedwa: Ixesha lokufumana i-Sense (A10002) | Izisombululo ze-OMG
Ukhuseleko lwabasebenzi yedwa: Ixesha Lokufumana iNgxaki (A10002)
Inkampani enabasebenzi abenza umsebenzi owenziwayo wedwa bodwa komnye umsebenzi ngaphandle kokusondelwa kwaye kubhekiswa kubhekiswa kuyo kubhekiswa kubo njengomsebenzi omnye. Bahlala befuneka ukwenza imisebenzi ebaluleke kakhulu kodwa bekwayingozi kakhulu, uninzi lweendima kunye nomsebenzi abawenzayo kunokuba sesichengeni kakhulu ebomini. Ukuthathela ingqalelo ukhuseleko lwabasebenzi kunye nempilo kubalulekile nje ukuba abantu basebenze kwezi ndawo zinobungozi. Abasebenzi bebodwa bahlala befumana umngcipheko wemihla ngemihla ngobukhulu obahlukeneyo kwaye akukho mntu ubancedayo. Kulungile ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwenkqubo yezokhuseleko lwabasebenzi oluqhutywa ngumbutho, nokuba ngaba baqhuba inkqubo esisikhokelo okanye inkqubo esekwe kwitekhnoloji. Inkqubo yesikhokelo inokubandakanya ukuba ngononophelo kwaye ujonge imeko yakho, ngelixa wenzakeleyo kuya kufuneka ufumane unyango lokuqala okanye ubambe i-ambulensi. Le ndlela yokuqinisekisa ukhuseleko yindlela endala esetyenzisiweyo esetyenzisiweyo yamaxesha aphambi kokuba kuqunjelwe iteknoloji. Kuhlala kubalulekile ukwazi ukuba yeyiphi inkqubo yezokhuseleko eqhutywa ngumbutho.
Wonke umqeshi kufuneka ajongisise ukuba banenkqubo yesikhokelo okanye inkqubo yetekhnoloji. Kwinkqubo engasasebenziyo, abasebenzi banokuba semngciphekweni omkhulu kuba banokwenzakala nangaliphi na ixesha. Ingakhokelela ekufeni okanye ukubanyanzela ngaphandle ukuba bangakwazi ukusebenza. Abaqeshi bakholelwa ukuba abanayo inkqubo yokhuseleko banokusebenzisa ezi ndlela zilandelayo ukuza nemingcipheko yabasebenzi bebodwa kwaye banike ukhuseleko oluphezulu kubasebenzi babo. Ezi ndlela zezi:
Ukuchonga umngcipheko kunye nobungozi; Imithetho yokuqala yokukhusela abasebenzi bakho bodwa kukuchonga bonke ubungozi kunye neengxaki ezinokubakho. Ahlulahlulwe ngokwamahlelo amabini:
Umngcipheko kwindalo esingqongileyo: le mingcipheko inokubandakanya yonke impilo enxulumene nokunokubangela izifo ezinje ngeentliziyo, ukubetha kunye nokuqaqanjelwa sisifo okanye nasiphi na esinye isifo esifuna ukunyangwa kwangoko. Ezi ngozi zinokubandakanya ukwenzakala kakhulu, ukuwa, uhambo kunye nezinye izoyikiso ezinokuthi zibonwe njengemeko yabantu.
Umngcipheko wentlalontle: Umngcipheko wentlalo lolona hlobo luqhelekileyo lomngcipheko abajongane nabasebenzi. Kuba abasebenzi bayanxibelelana nabantu abahlukeneyo mihla le kunokubakho iimeko zokuphangwa, ukuhlaselwa ngokwasemzimbeni, ukuhlaselwa ngokwesondo okanye nokubethwa ngengqondo. Ngokwenene akunakwenzeka ukuthemba wonke umntu odibana naye ngelixa usebenza.
Ukuqhuba uvavanyo olulodwa lwabasebenzi; ukuze inkampani ilwe neengozi ezinokubakho, kufuneka kubekho indlela esebenzayo. Inokubandakanya ukuba nemibuzo emininzi kunye nokubeka isisombululo kuyo. Imibuzo efana nale:
Ngaba ziya kusebenza ukubamba ngesandla?
Ngaba abasetyhini basemngciphekweni wokuba basebenza bodwa?
Ngaba umsebenzi uya kubandakanya ukuphatha idangatye elihamba ze?
Ngaba umsebenzi uza kwenziwa uphezulu?
Ngaba lo msebenzi ubandakanya ukufikelela okanye ukunxibelelana nezilwanyana?
Ngokuphendula le mibuzo, iinkampani ziyakwazi ukwazi umngcipheko obandakanyekileyo kwaye zivavanye ngokubeka amanyathelo kwindawo
Ukuqeqesha abasebenzi abodwa kunye nabaphathi; Ukuba noqeqesho olwaneleyo kubaluleke kakhulu njengoko abasebenzi bekulungele ukujongana neengxaki kwaye benze izinto ngokukhawuleza. Olu qeqesho lungabandakanya: ukwazisa ngeengozi zomsebenzi, uqeqesho lokuqala, uqeqesho lokuqhuba kunye nokuqeqesha abasebenzi ngendlela yokusebenzisa umatshini kakuhle.
Ukusetyenziswa komgaqo-nkqubo omnye wokusebenza; Oku kunceda ukugcina abasebenzi kunye neeasethi zikhuselekile. Umgaqo-nkqubo wabasebenzi osebenza yedwa kufuneka ubanjiwe kuba banegalelo kwindawo ekhuselekileyo yokusebenza. Bakwakha nomsebenzi wokumisela uvavanyo lomngcipheko abanokuthi baphazamise abasebenzi.
Ukukhuthaza intsebenziswano phakathi kwabasebenzi abodwa kunye nabasebenzi abalawulayo; Kubalulekile ukuba yonke indawo ngexesha abalawulayo bayazi indawo kunye nemisebenzi yabasebenzi abodwa. Oku kukuqinisekisa ukuba banokubabeka esweni kwaye basondele xa kukho ingxaki. Okwangoku, kubalulekile ukuba babe nenkqubo yokubeka iliso kubasebenzi bebodwa.
Ukubonelelwa ngezixhobo ezilungileyo kubasebenzi abodwa; Ukuxhotyiswa kakuhle kuthetha ukuba, xa umsebenzi eyedwa, akasayi kuba nakho ukwenza umsebenzi wakhe kakuhle, kodwa uya kuziva ekhuselekile njengoko esebenza ngokusebenza nezixhobo ezilungileyo.
Tyala imali kwinkqubo yokujonga abasebenzi; Inkqubo eyodwa yabasebenzi yinkqubo yekhompyuter okanye mhlawumbi indibaniselwano yezicelo ezinceda ukubeka esweni ishishini kunye nokulawula abasebenzi bebodwa ngelixa besazi isikhundla sabo nokufumana umntu phantsi kunye ne-SOS isilumkiso. Bajikeleza kwi-android, IOS kunye neqonga lewebhu.
Namhlanje, itekhnoloji ichaphazele inxenye yobomi bethu, abantu ngoku banokusebenza ngakumbi besebenzisa izixhobo eziphambili ukukhawulezisa inkqubo yokusebenza phantsi kwe-automation epheleleyo. Inkqubo yokubeka iliso labasebenzi yiteknoloji entle yokunceda iinkampani kakhulu. Ngoku inkampani inokwenza ngokuthengwa kwezi zixhobo kwaye izisebenzise. Izibonelelo zezi:
Ukusebenzisana ngokukhawuleza kunye nonxibelelwano
I-iHelp-i-Man Down System- Isisombululo soKhuseleko saBasebenzi eLone
Njengenkampani kunyanzelekile ukuba unake abasebenzi kwaye uqiniseke ngokhuseleko lwabo. Abasebenzi baseLone basengozini enkulu kwaye kufuneka babekwe esweni ngononophelo, i-iHelp iyinto yonke oyifunayo ukugcina abasebenzi bakho bekhuselekile. Ngezinye zezi zinto zibalulekileyo, i-iHelp igcina abasebenzi bekhuselekile ngelixa benceda abaqeshi ukuba bababeke esweni. Uncedo lucwecwe oluphambili oluphindaphindiweyo njengendoda phantsi kwenkqubo, isixhobo esenziwe ngokukodwa ukuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi abodwa. Ezinye zeempawu eziphambili onazo zezi:
ukulandelela indawo; Oku kwenza ukuba kube lula kakhulu ukulandelela indawo yabasebenzi rhoqo ngeGPS
Ukutsalwa kokuwa; kunye nabanye abenzi boluvo emva kokuwa kufumaneke ukuba i-alam ithunyelwe kwiqela lenkxaso
Unxibelelwano lwendlela ye-2; Kuyenzeka ukuba unxibelelane nomsebenzi ngolu khetho
umgangatho wobungqina bamanzi; Nokuba uphantsi kwamanzi, isixhobo sisebenza kakuhle
Scofa iqhosha lokufowuna i-SOS; ngompu omnye weqhosha i-alamu ingathunyelwa kwiqela lenkxaso
Isoftware yasimahla; ifumaneke kwi-Android kunye ne-IOS.
Kubasebenzi abasebenza kwicandelo elinobungozi kakhulu njengokwakha, izixhobo zendalo, ukhathalelo lwempilo, ukunyanzeliswa okanye ukuthutha. Isixhobo se-iHelp sinika isisombululo esipheleleyo sokhuseleko sabasebenzi ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bakhuselekile ngamaxesha onke kwaye xa besengozini abaqeshi bayazi kwaye banako ukuthumela uncedo kwangoko.
3534 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-8 Namhlanje